ဆားအလွန်အကျွံစားခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ | MyFood Myanmar
သင်ဟာ အငန် အလွန်အကျွံစားမိနေပြီလား? တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတဲ့ အတိုင်း အစားအစာတွေဟာ လိုတာထက်ပိုပြီး စားသုံးမိနေပြီဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စားနေတုန်းမှာတော့ မသိသာပေမယ့် သူများဟင်းတွေ စားလို့ မရတော့ဘူး။ ဘာစားစား အငန်လေး ထပ်ထည့်လိုက်ရမှ အဆင်ပြေသလို ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အငန်ကို အလွန်အကျွံ စားမိနေပါပြီ။ ဆားဟာ အစားအစာတွေကို အရသာ ရှိစေဖို့ ဖြစ်ပြီး အစာချေစနစ်ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ တားဆီးရပါတော့မယ်။ နေ့စဉ် လူတစ်ယောက်ဟာ လိုအပ်တဲ့ ဆိုဒီယမ် ပမာဏ ရှိပါတယ်။ 3kg လောက် စားပေးရင် လုံလောက်ပါပြီ။ ဒါထက်ပိုပြီး ဆိုဒီယမ်တွေ ရနေရင်တော့ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာပါပြီ။ အငန်ကိုေ လျှာ့စားမယ်ဆိုရင်တော့ မမှားပါဘူး။
ဆိုးကျိုးတွေထဲမှာ အဓိက မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ သွေးဖိအား မြင့်တက်
ဆားကို လိုတာထက် ပိုစားတဲ့ အခါ သွေးဖိအား မြင့်တက်စေနိုင်တဲ့ အချက်က အဆိုးဆုံးပါ။ သွေးရုတ်တရက် တိုးတာတို့ ခေါင်းကိုက်တာတို့ ဖြစ်စေပြီး နှလုံး ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ပိုများပါတယ်။
၂။ နှလုံး ကျန်းမာရေး
အငန် ပိုစားခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေထဲမှာ နှလုံး ကျန်းမာရေးပါ ရနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးနဲ့နှလုံးရောဂါဟာ စပ်ဆက်နေတဲ့ သဘောဖြစ်တဲ့ အတွက် နှလုံး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဆားကို လိုတာထက် ပိုပြီး မစားမိဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ရေအရမ်းငတ်တယ်လို့ ခံစားရဖူးပါလား? အလိုလို နေရင်း ရေတအားငတ်သလို ခံစားရပြီဆိုရင်တော့ ဆားတွေ အလွန်အကျွံ စားမိထားလို့ပါပဲ။ အငန်ဓာတ်အများကြီး ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေ ကို စားမိတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ရေတအား ငတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆားအလွန်အကျွံစားမိတယ်လို့ ခံစားနေရရင်တော့ ရိုးရိုးရေ (ရေခဲရေ မဟုတ်)များများ သောက်ပေးပါ။
၄။ ဖောရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်
ဆား အလွန်အကျွံစားခြင်းဟာ ကြာရှည်မှာ အန္တာရာယ် ရှိလာနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ ဖောရောင်လာခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်ထဲမှာ အရည်ပိုတွေ များပြီး အရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်၊ လက်နဲ့ ဒူးတွေမှာ ဖောရောင်ပြီး နာကျင်တာတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆား စားခြင်းကို လျှော့ပြီး ရေများများ သောက်ပေးပါ။
Fish Head Curry (ငါးခေါင်းဟင်း)
သထုံ ထမင်းဝါ (မုန့်ဟင်းခါး)